Fika efatra ahaizana teny gasy (Tapany faharoa) – Blaogin'i Voniary
Niresaka ireo dingana roa voalohany amin’ny fianarana teny malagasy isika tamin’ny lahatsoratra farany. Tsy inona izany fa ireo fomba ahafantaranao ireo voambolana malagasy, ny fitsipi-panoratana sy ny tsipelina ary ny fomba fanonona sy ny filanton’ny teny Malagasy dia ny : MAMAKY sy MIHAINO.
Anio indray, hiroso amin’ny dingana roa managaka isika. Koa mamakia finaritra ary! Dia aza adino ny fampiharana.
3 – Miteny
Tonga eo amin’ny fampiharana amin’izay ary ianao, eo amin’ilay fotoana amoahanao ireo voambolana noraketinao. Noho ny rafi-pampianarana misy eto amintsika dia matetika sakanana tsy hiteny gasy ny ankizy rehefa any an-tsekoly. Tsy vitsy koa ny fianakaviana mirehareha ery fa tsy andrenesana afa-tsy teny frantsay ao an-tokantranony. Ny an’ny tanora sy ny olon-dehibe indray dia mati-kenamaso sy mati-lolo angaha ka ny tenim-bazaha hatrany no asesika rehefa miresaka. Raha tsy izay dia asiana voambolana frantsay lalandava eny anelanelany eny. Tsy fahazarana no mahatonga izany! Araka ny voalazako tetsy ambony koa dia ny tsy famakianao sy fihainoanao teny malagasy no mahatonga anao tsy mahay mandaha-teny tomombana tsara. Ny vahaolana izany dia ny fizaranao ireo voambolana mba afahanao miresaka tsara amin’ny teny malagasy.
cc: Ulrich Andrianina
Tsy azo hadinoina koa ity antony iray mahatonga ny sasany tsy hiteny gasy ity: ny tahotry ny ho voakihana. Misy tokoa ireo mpandala ny maha-malagasy sy tompon’ny teny malagasy angaha no azo ilazana azy, izay sarotiny dia sarotiny ka manakiana avy hatrany raha sendra misy teny diso aloaky ny vava. Tsy vitan’izany fa miaro fahasiahana sy fanatsatsoana izany. Rariny raha kivy ny sasany manoloana ireny.
Izao anefa no ambarako aminao, raha tianao ny hiteny malagasy dia aza miahotra fa mitenena avy hatrany. Na misy diso aza tsy maninona fa eo ireo namana, havana, mpiray tanindrazana aminao hanampy anao. Io ny tenindrazanao, teny nibeazana, teny nibadana avy amin’I dada sy neny, ka tsy tokony hisalasala ianao hivolana azy.
Ho an’ireo zoky, raiamandreny sy mpandala ny maha-malagasy indray, aoka re mba am-pitiavana no hanitsiana ireo zandry zanaka maisa-bava amin’ity fitenindrazana iombonana ity e!
4 – Manoratra
Ilay miteny vita ihany sady mandeha foana iny na vary amin’ny akotry aza. Fa ny manoratra kosa, ny ankamaroan’ny Malagasy angamba dia tany an-tsekoly tamin’ny taranja malagasy no nandaha-tsoratra tamin’ny tenindrazantsika farany. Raha ny eny amin’ny ambaratonga ambony manko dia teny frantsay avokoa, ny any am-piasana moa manginy fotsiny. Vokatr’izany very tanteraka isika amin’ny fanoratana ny teny malagasy. Aiza ary no sehatra afahanao manoratra?
Eny amin’ny tambazotran-tserasera fampiasanao isan’andro eny, miezaha manoratra amin’ny teny malagasy madio rano, tsy misy fangarony, tsy misy fanafohizan-teny. Azonao atao koa ny manokatra pejy na blaogy izay sehatra natao hanoratana sy hanehoan-kevitra ka malalaka kokoa ianao raha hamoaka lahatsoratra.
Araraoty ireny fifaninana isan-karazany ireny toy ny fifaninana lahatsoratra blaogy tao anatin’ny hetsika Teny Gasy 2.0 farany teo, ny fifaninana soratononina karakarain’ny foibe momba ny teny an’ny akademia malagasy na ny fifaninana tantara foronina sy sombintantara maro samihafa. Sehatra iray ahafahanao mahita ny fari-pahaizanao ny teny malagasy ireny. Raisina toy ny adin’ombalahin’ny mpianakavy izy ireny, ny resy tsy akoraina ary ny mandresy tsy hobiana satria fanandratana sy famelomana ity tenindrazantsika ity no tanjona.
manoratra malagasy, mianatra teny malagasy, miteny malagasy, teny gasy, teny malagasy, voambolana malagasy
2 commentaires sur “Fika efatra ahaizana teny gasy (Tapany faharoa)”
Misaotra tamin’ny fifampizarana ô ☺☺
Mankasitraka ny mpamaky e!